$ 2.2 milyan ayaa la siiyay 31 Hay'adaha Adeegyada Halyeeyada ee gobolka Washington - Waaxda Ganacsiga Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|$ 2.2 milyan ayaa la siiyay 31 Hay'adaha Adeegyada Halyeeyada ah ee gobolka Washington
$ 2.2 milyan ayaa la siiyay 31 Hay'adaha Adeegyada Halyeeyada ah ee gobolka Washington
Deeqaha Soo-kabashada Bulshada ee aan macaash doonka ahayn waxay caawisaa ururada bixiya meelaha lagu kulmo iyo adeegyada halyeeyada iyo qoysaskooda gobolka oo dhan.
OLYMPIA, Wash – –Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington iyo Waaxda Arimaha Dibada ee Gobolka Washington (WDVA) waxay ku abaal mariyeen $ 2.2 milyan oo deeqo ah soo kabashada bulshada ee aan macaash doonka ahayn si ay u caawiyaan Ururada Adeegyada Halyeeyada ah ee aan macaash doonka ahayn (VSOs) iyagoo sii wadaya taakuleynta halyeeyada intii lagu jiray aafada. VSOs waxay bixiyaan adeegyo muhiim u ah jaaliyadaha gobolka oo dhan halyeeyada iyo qoysaskooda, waxayna door muhiim ah ka ciyaaraan hadafka WDVA ee ah "u adeegida kuwa u adeegay."
Cudurka 'COVID-19' oo dillaacay iyo xiritaanka xarumihii Hay'adda Adeegga Halyeeyga ee gobolka oo dhan waxaa ka dhashay luminta dakhligii ka soo xaraysanayay lacag uruurinta iyo howlaha kale.
"Waa sharaf noo ah inaan siino kaalmadan muhiimka ah Ururada Adeegyada Halyeeyada ah," ayuu yiri Agaasimaha WDVA Lourdes "Alfie" Alvarado-Ramos. "VSOs waxay fursad u siisaa halyeeyada inay la xiriiraan asxaabtooda, helaan caawinaad buuxinta sheegashooyinka naafada ee Maamulka Veterans Federal, waxayna u adeegaan sidii goobo ay isugu yimaadaan tiro ka mid ah ururada bulshada ee aan macaash doonka ahayn."
"Hay'adaha aan macaash doonka ahayn waxaa si gaar ah u saameeyay aafada, iyagoo lumiyay fursadihii lacag uruurinta iyo taageerada kale isla waqtigaas baahida loo qabo in adeegyadooda la kordhiyo," ayay tiri Agaasimaha Ganacsiga Lisa Brown. "VSOs waxay door muhiim ah ka ciyaaraan xoojinta bulshada waxaanan aad ugu faraxsanahay inaan bixinno maalgalintan si aan uga caawino inay u sii wadaan u adeegida halyeeyadayada iyo qoysaskooda maadaama aan bilaabayno safarka si wada jir ah ugu laabanayno sidii caadiga ahayd."
Ururada qaata lacagaha deeqda waa:
Ururka African PTSD Association
Sanduuqa Xorriyadda Mareykanka
Shabakada Waxqabadka Qoysaska Milatariga Mareykanka
Xafiiska Adeegyada Halyeeyada ee AMVETS
Ururka Qaranka ee Halyeeyada Madow
Xarunta Columbia Basin Halyeey
Xarunta Adeegga Halyeeyga ee Degmada Cowlitz
Hoosta Fududeynta Nabadda
Hoyga leh geesiyaal
Ururka Marine Corps
Amarka Milatariga ee Wadnaha Casriga
Qaybta 'Puget Sound Cutubka', Amarka Milatari ee Dagaallada Adduunka
Shabakadda Hindisaha Wellness (MILWIN)
Adeegyada Halyeeyada ee Nineline
Buddies Northwest Buddies
Gaarsiinta iyo Adeegyada Kheyraadka (OARS) ee Haweenka Halyeeyada ah
Howlgalka Qoyska Milatariga
Halyeey Rites Inc.
Halyeeyayaashii Xirfadaha Ecological Wadajirka
Halyeeyadii Dagaalada Shisheeye, Waaxda WA
Voiture 99 de La Societe des Quarante Hommes iyo Huit Chevaux
Hooyooyinka Xiddigaha Dahabka ah ee Gobolka Washington
Waaxda Arimaha Dibada ee Gobolka Washington waxay rajeyneysaa inay lashaqeeyaan ururadan aan macaash doonka aheyn markay sii wadaan soo kabashadooda mar labaadna way u furan yihiin inay taageeraan halyeeyada iyo qoysaska ku kala baahsan gobolkayaga.
Ganacsiga oo iskaashi la sameeyay Farshaxanka Wareeg kale oo ka mid ah deeqaha Gargaarka Bulshada ee aan macaash doonka ahayn oo sidoo kale ay ka mid ahayd maalgelinta ururrada u adeegaya halyeeyada. Arag soo koobitaan buuxa oo ku saabsan ganacsiga iyo kaalmada aan faa'iido doonka ahayn ee ay maamulaan Ganacsiga iyo la-hawlgalayaasheeda halkan.
Deeqaha bulshada iyo amaahdadeeqoWar-saxaafadeedXoojinta bulshada
← Ganacsiga iyo ArtsFund ayaa abaalmarin ku dhowaad $ 11 milyan oo gargaar faafa ah u fidiyay hay'adaha samafalka ah ee Washington Marka dib loo furayo, gobolka wuxuu bilaabayaa muraayada SmartWA si looga caawiyo ganacsiyada yaryar inay si nabad ah dib ugu furaan →